Faucets an-dakozia kianja mainty
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets / WOWOW Faucets an-dakozia mainty
Faucets Faritra kely any amin'ny WOWOW Black Square Faucets
Ny tsirairay santimetatra dia efa nasiana tombo-kase, hatsikana volon-drantsana tsara tarehy mety hisorohana ny harafesana, ny loto, ny tanimbary
Ny baran-tsolika misy tsimoka lehibe fanampiny dia manome rano mitohy amin'ny endriny tsara, tsy tsodrano intsony, mahatonga ny milina fanasana ho mahomby kokoa amin'ny haavony, maka tahaka ny fihetsiky ny rano voajanahary.
MAFANA DUAL MAFANA & MASINA: andalana famatsiana faucet mangatsiaka sy mafana natolotra, ny lever dia afaka mamehy haingana ny mari-pana sy ny habetsany, mahatonga ny fomba haingana sy mahomby
Manam-pahaizana amin'ny Neoperl Aerator
Mpanampy kalitao manome famokarana rano malefaka sy malefaka, azo antoka ny anti-splatter.
Ny fofona mahery dia afaka manamboatra ny olana fanasana rehetra.
Vatosoa tokana Vintage
Azo atao ny mihazakazaka azy amin'ny fampiasana tantanana iray mba hisakanana ny hafanana na mikoriana. Ny famolavolana maoderina dia mifanentana amin'ny trano sy trano fandraisam-bahiny, lemaka ary ireo faritra ireo.
Ny fehikibo voaroy marobe be dia be dia afaka manakana ny takila an-tsokosoko isan'andro, ankoatra ny fisorohana ny fanoren-tànana, ny ranon'ny rano. Fikarakarana tsy mahomby amin'ny fanala lamba.
Refy mahazatra Amerikanina
Zavamaniry: vy varahina / vy tsy misy vy / metaly
Azo antoka ny faharetana, tsy misy mineraly sy fironana voasakana.
Karakarao ny fahasalaman'ny ankohonanao.
Fandraisana amin'ny Faucet
Afa-tsy ny hardware grc, omenay anao koa ny fonon-tanana ho an'ny fanamorana mora, azafady, matokia.
SKU: 2312301B Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets Tags: Faucet amin'ny lakozia, Matte Black